Wacdigii Buurta (Qaybta 1), Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Matayos 5: Wacdintii Buurta (Qaybta 1)
Xitaa kuwa aan Masiixiyiinta ahayn waxay maqleen wacdinta buurta dusheeda. Masiixiyiintu waxay maqlaan khudbado badan oo ku saabsan, laakiin waxaa jira qaybo ay adag tahay in wax laga fahmo sidaas darteedna aan nolosha si sax ah loogu adeegsan karin.
John Stott ayaa sidan u dhigay:
“Wacdinta buurta waa midda ugu wanaagsan ee loo yaqaan waxbarista Ciise, laakiin sidoo kale waa midda ugu yar ee la fahmay oo runtiina sida ugu yar ayaa loo raacay” (Farriinta wacdinta buurta dusheeda, pulsmedien Dorms 2010, bogga 11). Aynu mar kale baranno wacdiga buurta. Waxaa laga yaabaa inaan helno khasnado cusub oo aan dib u xasuusano kuwii hore.
“Markuu arkay dadkii [Ciise], ayuu buurta fuulay oo fadhiistay; oo xertii ayaa u timid. Kolkaasuu afkiisa kala qaaday oo wax baray oo hadlay. (Mt 5,1: 2-XNUMX). Sida had iyo jeer dhacda, dadkii badnaa ayaa is raacay. Wacdiyuhu kuma koobna oo keliya xertii. Sidaa darteed Ciise wuxuu xertiisii ​​faray inay faafiyaan waxbaristiisa adduunka oo dhan, oo Matayos wuxuu qorey in kabadan hal bilyan oo qof inay aqriyaan. Waxbaristiisa waxaa loogu talagalay qof kasta oo diyaar u ah inuu dhageysto.
Waxaa barakaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiinta ah oo halkaas jooga, maxaa yeelay iyagu waa boqortooyada jannada (aayadda 3). Maxaa loola jeedaa in “liita ruuxa”? Ma qabtaa isku-kalsooni hooseeya, oo aad dhif u daneyneyso waxyaalaha ruuxiga ah? Khasab maaha. Dad badan oo Yuhuud ah ayaa naftooda ugu yeerayay "kuwa saboolka ah" sababtoo ah inta badan waxay ahaayeen kuwa sabool ah waxayna ku tiirsanaayeen Ilaah inuu daryeelo baahiyahooda maalinlaha ah. Markaa Ciise waxa laga yaabaa inuu u jeeday kuwa aaminka ah. Laakiin inaad ahaato “qof sabool ahaan xagga ruuxa liita” ayaa waxbadan soo kordhinaysa Dadka saboolka ahi way ogyihiin inay ka maqan yihiin waxyaabaha daruuriga ah. Kuwa saboolka ah ee xagga ruuxa lihi waxay og yihiin inay Ilaah u baahan yihiin; waxay dareemayaan nolol la'aan. Uma maleynayaan naftooda inay Eebbe raali ka yihiin iyagoo u adeega. Ciise wuxuu yidhi Boqortooyada jannada waxaa la siin doonaa dadkaas oo kale. Waa kuwa is-hoosaysiiya, ee qabatimay kan boqortooyada jannada la siinayo. Adiga uun waad ku kalsoontahay naxariista Eebbe.
Waxaa barakaysan kuwa halkaas ku xanuunsada, maxaa yeelay waa in la qalbi qaboojiyo ”(aayadda 4). Oraahdan waxaa ku jira wax xoogaa macaan, maxaa yeelay erayga "barakeysan" wuxuu sidoo kale macnaheedu noqon karaa "mid faraxsan". Ciise wuxuu yidhi kuwa murugeysan waa kuwa faraxsan, maxaa yeelay ugu yaraan waxay u qalbi qaboojisaa iyaga inay ogaadaan in baahidoodu aysan ahayn mid joogto ah. Wax walba waa la toosin doonaa. Ogsoonow in Beatyaashu aysan amarro aheyn - Ciise ma oran in silica uu faa'iido u leeyahay ruuxi ahaan. Dad badan ayaa durba silica adduunkan ku jira Ciise wuxuu yidhi waa in lagu raaxeeyaa - malaha markay Boqortooyada jannada timaado.
Waxaa barakaysan kuwa camal qabow, maxaa yeelay, iyagu dhul bay lahaan doonaan (aayadda 5). Bulshooyinka qadiimka ahaa, dalka waxaa badanaa laga qaadi jiray kuwa camalka qabow. Laakiin habka Eebbe u sameeyo ayaa waliba hagaajin doona.
Waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan caddaalad, maxaa yeelay waa inay buuxsamaan ”(aayadda 6). Kuwa u baahan caddaalad iyo caddaalad (ereyga Griig macnaheedu waa labadaba) waxay heli doonaan waxay doonayaan. Kuwa ka xumaada xumaanta oo doonaya in wax loo hagaajiyo waa in la abaalmariyo. Da'daan, dadka Eebbe waxay ku dhacaan cadaalad daro; caddaalad ayaan u rajeyneynaa. Ciise wuxuu noo xaqiijinayaa in rajadeenna aysan noqon doonin wax aan micno lahayn.
Waxaa barakaysan kuwa naxariis leh, waayo, iyagu waa u naxariisan doonaan ”(aayadda 7). Waxaan u baahan nahay naxariis maalinta qiyaame. Ciise wuxuu leeyahay tani waa sababtaas darteed waa inaan u naxariisano waqtigaan. Tani waxay ka soo horjeedaa dhaqanka kuwa cadaalada dalbanaya oo khiyaaneeya kuwa kale ama kuwa u baahan naxariis, laakiin iyagu naftooda u naxariista. Haddii aan rabno inaan nolol wanaagsan ku noolaano, waa inaan ku dhaqaaqnaa sida ugu habboon.
Waxaa barakaysan kuwa qalbiga ka daahirsan; maxaa yeelay, Ilaah bay arki doonaan ”(aayadda 9). Qalbi daahir ahi wuxuu leeyahay hal rabitaan oo keliya. Kuwa Ilaahay keligiis doondoonaya waa hubaal inay isaga heli doonaan. Waxaan rabnaa waa la abaalmarin doonaa.
Waxaa barakaysan kuwa nabadda ka shaqeeyaa; maxaa yeelay, waxaa loogu yeeri doonaa carruurta Ilaah ”(aayadda 9). Dadka saboolka ahi xoog kuma qasbi doonaan xuquuqdooda. Carruurtiisu Ilaah waxay isku halleeyaan Ilaah. Waa inaanu muujinnaa naxariis iyo naxariis, mana aha cadho iyo isqabqabsi. Kuma noolaan karno nolosha cadaaladda anagoo ku dhaqaaqeyna caddaalad darro. Maaddaama aan rabno nabad ka dhex dhalata boqortooyada Ilaah, waa inaanu midkeenba midka kale ula dhaqmo si nabdoon.
Waxaa barakaysan kuwa xaqnimada loo silciyo, maxaa yeelay iyagu waa boqortooyada jannada (aayadda 10). Dadka sida saxda ah u dhaqma mararka qaarkood waa inay silcaan maxaa yeelay waa wanaagsan yihiin. Dadka qadhaadh ayaa jecel in laga faa'iidaysto. Waxaa jira kuwa xitaa xanaaq ka muujinaya kuwa wanaagga sameeya maxaa yeelay tusaalahooda wanaagsan wuxuu kadhigaa dadka xun xun. Mararka qaar kuwa xaqa ahu waxay ku guuleystaan ​​caawinta kuwa la dulmay iyagoo daciifa caadooyinka bulshada iyo qawaaniinta awood siiya kuwa aan xaq ahayn. Ma rabno inaan silcinno, laakiin kuwa xaqa ah waxaa badanaa silica dadka xun. Isagoo dhiirran ayuu yidhi. Qabso. Boqortooyada jannada waxay iska leedahay kuwa khibrada u leh.
Kadib Ciise wuxuu si toos ah ugu laabanayaa xertiisii ​​oo wuxuu kula hadlayaa ereyga "adiga" ee qofka labaad jamac ah: "Waad barakaysan tihiin goortii dadku caayaan oo lay silciyaa aniga aawaday, oo wax xun oo dhan oo xun oo dhan ah ayay idiinka sheegaan haddii ay been ula hadlaan. Noqo mid faraxsan oo kalsooni leh; Ajirnimo baa jannada ku jirta. Maxaa yeelay iyaguna way silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey (aayadaha 11-12).
Aayaddan muhiim ah ayaa ku jirta aayaddan: “aniga aawaday”. Ciise wuxuu rajaynayaa in xertiisu in lagu silcin waayo ma ahan kaliya qaab nololeedkooda wanaagsan, laakiin sidoo kale xiriirkooda ay la leeyihiin Ciise. Sidaa darteed, farax oo isku kalsoonow marka lagu soo daba socdo - ugu yaraan ficiladaada waa inay ku filan yihiin in la ogaado. Adduunyada wax baad ka beddeshaa oo waad iska hubsan kartaa in lagu abaalmarin doono.
Ciise wuxuu sidoo kale adeegsaday jumlado gaagaaban oo gaagaaban si uu u sharraxo sida ay xertiisu u saamayn karto dunida: “Waxaad tihiin cusbadii dhulka. Haddii cusbada aan cusbo cusbada la hayn, maxaad cusbo ku cusbaynaysaa? Faa'iido ma leh laakiin in la tuuro oo dadku ha fasaxo ”(aayadda 13).
Haddii cusbadu lumiso dhadhamkeeda, waxba tari mayso maxaa yeelay dhadhankiisu wuu siiyaa qiimaheeda. Cusbada si sax ah ayey u fiicantahay maxaa yeelay waxay dhadhamisaa wax ka duwan waxyaabo kale. Xerta xerta Ciise waxay ku kala firidhsan yihiin si la mid ah adduunka - laakiin haddii ay dunida la mid yihiin, waxba tari maayaan.
Waxaad tahay nuurka dunida. Magaalada buurta ku jiifta lama qarin karo. Ilays looma shido oo waxaad hoos dhigtaa weel hoostiisa, laakiin waxaad saaraysaa laambad. Markaa waxay u iftiimaysaa qof kasta oo guriga jooga (aayadaha 14-15). Xertii waa inaysan qarin - waa inay muuqdaan. Tusaalahaagu wuxuu ka mid yahay farriintaada.
"Iftiinkaagu dadka hortiisa ha iftiimo, si ay u arkaan shuqulladaada wanaagsan oo ay u ammaaneen Aabbihiinna jannada ku jira" (aayadda 16). Xilli dambe, Ciise wuxuu ku dhalleeceeyay Farrisiinta iyagoo raba in loo arko shaqadooda (Mat
6,1). Shaqooyinka wanaagsan waa in horay loo arkaa, laakiin waa ammaanta Ilaah ee ma aha kuwa annaga qudha.
Sidee ayay xertu u noolaan lahayd? Ciise wuxuu ka hadlayaa aayadaha 21 illaa 48. Wuxuu ku bilaabay digniin: Haddii aad maqashid waxaan dhaho, waxaad la yaabi kartaa inaan isku dayayo inaan Qorniinku xaliyo. Ma qabo. Waan sameeyaa oo waxaan si sax ah u baraa waxa ay Qorniinkuna ii sheegaan. Waxaan idhaahdo waan kaa yaabi doonaa, laakiin fadlan ha khaldin.
Ha u malaynina inaan u imid inaan buriyo sharciga ama nebiyada; Uma aan imaan inaan baabi'iyo, laakiin inaan u oofiyo ”(aayadda 17). Dad badan ayaa halkan diiradda ka saaraya sharciga waxayna u qaataan inay tahay su’aal ku saabsan inuu Ciise doonayo inuu ka qaado sharciga Axdiga Hore. Tani waxay adkaynaysaa in la fasiro aayadaha maxaa yeelay qof walba wuxuu ku raacsan yahay in ciise masiix, oo qayb ka ah himiladiisa, uu fuliyay qawaaniinta ka dhigaya mid aan loo baahnayn. Waxaad ka doodi kartaa inta sharci ee la saameeyay, laakiin qof walba wuxuu oggol yahay in Ciise u yimid inuu ka rogo ugu yaraan qaar ka mid ah.
Ciise kama hadlayo sharciga (jamac ahaan) laakiin wuxuu ku saabsan yahay sharciga (kali!) - taasi waa, Tawreed, shanta buug ee ugu horreeya Qorniinka. Wuxuu sidoo kale ka hadlayaa nebiyada, waa qeyb kale oo muhiim ah oo Kitaabka Quduuska ah. Aayaddani kuma saabsana shuruucda shaqsiyeed, laakiin buugaagta Axdiga Hore guud ahaanba. Ciise uma imaan inuu baabi'iyo Qorniinka, laakiin inuu u oofiyo.
Addeeciddu macno bay lahayd, dabcan, laakiin way ka sii badnayd. Ilaah wuxuu doonayaa carruurtiisu inay sameeyaan wax ka badan raacitaanka xeerarka. Markuu Ciise fuliyay Tawreed, ma ahayn oo keliya arrin addeecid. Wuxuu dhammaystiray wax kasta oo Tawreed weligiis muujiyey. Wuxuu sameeyey wixii reer binu Israa'iil ahaan kari waayeen.
Markaas Ciise wuxuu yidhi: "Runtii, waxaan kugu leeyahay, ilaa ay cirka iyo dhulku idlaan doonaan, xaraf yar ma dhaafi doono xatooyada mooyee ilaa ay wax walba dhacaan" (aayadda 18). Laakiin Masiixiyiintu maahan inay carruurtooda gudaan, ha dhisaan buul caleen, hana ku xidhin silsilad buluug ah tassels. Qof kastaa wuu oggol yahay inaanan ku qasbanayn inaanu dhawrno sharcigaas. Marka muxuu Ciise macnaheedu yahay markii uu yiri in sharciga midna jabin doonin? Sow ma aha kiis ahaan in dhaqan ahaan sharciyadan la waayey?
Waxaa jira saddex tixgelin oo aasaasi ah tan tan. Marka hore, waxaan arki karnaa in shuruucdani ayan wali baabi’in. Weli waxay ku qoran yihiin Tawreed, laakiin taa micnaheedu maahan inaan raacno. Taasi waa sax, laakiin uma muuqato in waxa Ciise uu doonayo inuu halkan ku yiraahdo. Marka labaad, qof ayaa dhihi kara in Masiixiyiintu ay dhawraan shuruucdan, oo ay rumaystaan ​​Masiixa. Waxaan ku hayna sharciga sharciga gudniinka qalbiyadeenna (Rooma 2,29:XNUMX) oo waxaan dhawraynaa dhammaan qawaaniinta caqiidada rumaysad. Taasi sidoo kale waa sax, laakiin ma aha inay ahaato waxa Ciise halkan ku yidhi.
Saddexaad, waa in la ogaadaa in 1. mid ka mid ah sharciyada uusan noqon doonin mid la buriyo ka hor inta wax walba la fulin iyo 2. qof walba wuxuu oggol yahay in ugu yaraan qaar ka mid ah sharciyadu aysan ansax noqon. Marka waxaan ku soo gabagabeynayaa 3. in wax walba la fuliyay. Ciise wuu oofiyey hawshiisii, sharciga axdigii horena mar dambe ma shaqaynayo. Si kastaba ha noqotee, muxuu Ciise ugu oran lahaa "ilaa jannada iyo dhulku idlaan doonaan"?
Miyuu kaliya yiri u sheegay inuu xoojiyo hubinta waxa uu yiri? Muxuu ereyga "to" labo jeer u isticmaalay markii mid ka mid ahi uu quseeyo? Ma garanayo Laakiin waxaan ogahay inay jiraan sharciyo badan oo Axdiga Hore ah oo Masiixiyiintu aysan ahayn inay dhawraan, iyo aayadaha 17 illaa 20 ha noo sheegin kuwa saameyn ku yeeshay. Haddaan soo xigano aayadaha sababta oo ah qawaaniinta qaarkood ayaa na habboona, waxaan si qaldan u isticmaalnaa aayadahaas. Iyagu nama baro in sharciyada oo dhami ay weligood shaqeynayaan, maxaa yeelay kani kuma quseeyo dhammaan sharciyada.
Amarradan - maxay yihiin?
Ciise wuxuu sii wadaa: “Ku alla kii lumiya mid ka mid ah amarradan yaryar oo dadka bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan ugu yar boqortooyada jannada, laakiin ku alla kii yeela oo baro, waxaa loogu yeedhi doonaa kan weyn boqortooyada jannada, (aayadda 19). Waa maxay amarradan "kuwan"? Ciise miyay tilmaamaya amarradii sharciga Muuse mise tilmaamihiisii ​​uu dhowaan bixin lahaa? Waxaan ubaahanahay inaan ka warqabno xaqiiqada ah in aayadda 19aad ay ku bilowdo ereyga "Sidaa darteed" (bedelkii "hadda" ee LUT).
Waxaa jira xiriir macquul ah oo ka dhexeeya aayadaha 18 iyo 19. Taasi micnaheedu ma aha in sharcigu sii jiri doono, in amarradan la baro? Taas waxaa ka mid ah Ciise oo ka hadlaya sharciga. Laakiin waxaa jira amarro ku jira Tawreed oo waqtigiisii ​​dhaafay oo aan mar dambe loo noqon doonin wax sharciga la baro. Sidaa darteed, Ciise ma dhihi karayn waa inaan barinno dhammaan sharciyada Axdiga Hore. Taasi waxay sidoo kale noqon lahayd mid ka soo horjeedda inteeda kale Axdiga Cusub.
Waxay u egtahay in isku xirnaanta macquulka ah ee u dhexeeya aayadaha 18 iyo 19 uu kala duwan yahay isla markaana uu diiradda saarayo waxyaabo badan oo ku saabsan qaybta gabagabada "illaa wax walba ay dhacaan". Tixgalintani waxay la macno tahay tan soo socota: Sharciga oo dhami wuu sii jiri doonaa ilaa ay wax waliba dhacaan oo "sidaa darteed" (maadaama Ciise wax walba oofiyey), waa inaan barinaa sharciyadaan (sharciyada Ciise, oo aan aqrin doono dhawaan) bedelkii sharciyadii hore, oo wuu dhaleeceeyay. Tan ayaa macno badan samaynaysa markii aad eegto macnaha guud ee wacdiga iyo Axdiga Cusub. Amarada Ciise waa in la baraa (Mt 7,24:28,20; 20:XNUMX). Ciise wuxuu sharraxay sababta: "Waxaan kugu leeyahay, Haddii xaqnimadaadu ka wanaagsan tahay tan culimmada iyo Farrisiinta, ma aad doontid boqortooyada jannada" (aayadda XNUMX).
Farrisiinta waxaa caan ku ahaa addeecadooda adag; xataa waxay qotonsadaan geedo yaryar iyo dhir udgoon. Laakiin caddaaladda dhabta ahi waa arrin qalbiga ku jirta, dabeecadda qofka, oo aan u hoggaansamin xeerarka qaarkood. Ciise ma dhahayo adeeciddeena shuruucdan waa inay ahaato mid ka sii fiican, laakiin adeeciddu waa inay ku dabaqdaa sharciyada ka wanaagsan, kaas oo uu si waadax ah u sharixi doono si dhakhso leh, maadaama aan ognahay wuxuu ula jeedo.
Laakiin annagu caddaalad uma lihin sidii aannu noqon lahayn. Kulligeen waxaan u baahan nahay naxariis mana u imaanayno Boqortooyada jannada xaqnimada aawadeed darteed, laakiin qaab kale, sida Ciise ku sharaxay aayadaha 3-10. Bawlos wuxuu ugu yeedhay hadiyadda xaqnimada, xaqnimada xagga rumaysadka, oo ah xaqnimada Ciise ee aan isla wadaagno markii aan isaga la midaysano xagga rumaysadka. Laakiin Ciise faahfaahin kama bixinin waxaas oo dhan.
Si kooban, ha u malayn in Ciise u yimid inuu baabi'iyo buugaagta Axdiga Hore. Wuxuu u yimid inuu sameeyo wixii Qorniinku sii sheegay. Sharciga oo dhami wuu sii jiray ilaa Ciise u dhammaystiro wax kasta oo loo soo diray. Wuxuu hadda na siinayaa heerar cusub oo caddaalad ah oo aan ku nool nahay oo aan ku bari karno.